ကမ္ဘာဦးတည်းက ကြောင်နဲ့ ကြွက်ဇာတ်လမ်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Short Story » ကမ္ဘာဦးတည်းက ကြောင်နဲ့ ကြွက်ဇာတ်လမ်း
ကမ္ဘာဦးတည်းက ကြောင်နဲ့ ကြွက်ဇာတ်လမ်း
Posted by etone on Jul 31, 2011 in Short Story | 14 comments
ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထ ၊ ယောက္ခမနဲ့ ချွေးမ ပြသနာ
ရွာသူ၊ရွာသားတို့ရေ…. ဒီတစ်ခါ မိသားစု ပြသနာလေး နည်းနည်း ဆွေးနွေးကြရအောင်နော် …. ။ ကိုယ်ပိုင်မိသားစုလေး အကြောင်း ဆွေးနွေးကြမယ်လေ … ။ ကိုယ်ပိုင်မိသားစုဆိုတာ ကတော့ ကိုယ်တိုင် တည်ထောင်ထားတဲ့ .. မိသားစုမျိုးပါ .. မိဘအိမ်မှာနေခဲ့ရတဲ့ မိသားစု ဘ၀မျိုးမဟုတ်ပဲ … အိမ်ထောင်ရက်သား ကျတဲ့အခါမှာ ရရှိလာတဲ့ မိသားစုဘ၀ဇာတ်ကြောင်းပေါ့ ။
တကယ်တမ်း ကိုယ်ပိုင် မိသားစု တစ်ခု ထူထောင်တော့မယ်ဆိုလျှင် တွေးစရာတွေ အများကြီးပါပဲနော် …. ။ အဆင်စုံ အသွေးစုံ လူတွေနဲ့ …. ဆက်စပ်ရမှာမို့ … စိတ်သဘောထား အတော်လေး ပြည့်ဝအောင် ထားတတ်မှ အဆင်ပြေမှာပါ … ။ များသော အားဖြင့် ယောက္ခမနဲ့ သားမက် ၊ ယောက္ခမနဲ့ ချွေးမ … မရီးနဲ့ ယောက်မ စတဲ့ပြသနာတွေကနေ အိမ်ထောင်တစ်ခု ပြိုကွဲဖို့ အထိ ဖန်တီးတတ်တယ် ဆိုတာပါပဲ … ။
လူတစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး … နှစ်ဦးပေါင်း တည်ဆောက်ထားတဲ့ မိသားစုဖြစ်ပေမဲ့ …. အိမ်တွင်းရေး အရှုပ်ရှင်းလေးတွေကတော့ … အနည်းနဲ့အများရှိတတ်တာပေါ့ … ။ ကမ္ဘာဦး ခေတ်ကတည်းက ဇာတ်လမ်းတွေလို့များ ရှေးလူကြီးတွေ ပြောခဲ့ကြသလားတော့ မသိပေမဲ့ … ဘယ်တော့မှ ပြောင်းလဲသွားချင်မရှိတဲ့ .. အိမ်တွင်းစစ်ပွဲလေးတွေ … အိမ်တိုင်း အလိုလိုမှာ ရှိတတ်ကြပါတယ် … ။
အိမ်ထောင် ကျခါစက နှစ်ဦးတစ်ဘ၀လို့ တွေးခဲ့ပေမဲ့လည်း …. အသက်ရှိထင်ရှားရှိနေသေးတဲ့ မိဘတွေ ရှိနေလျှင် ယောက္ခမဆိုတာ အော်တို ရလာတာပါပဲ …။ ယောက္ခမတွေရဲ့ … ချွေးမပေါ် ထားတဲ့ စိတ်သဘောထားကလည်း တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်မတူကြပါဘူး … ။ အိမ်ထောင်ကျပြီး အိမ်ခွဲနေရတဲ့ ချွေးမတွေ သိပ်မသိသာပေမဲ့ …. အတူတစ်အိမ်ထဲနေရတဲ့ ချွေးမတွေက ယောက္ခမရဲ့ ပညာပြခြင်း ခံရတာ များပါတယ် … ။ ကျွန်မ သားမမွေးဘူးလို့ … မိဘနေရာမှာ ကိုယ်ချင်း မစာတတ်လို့ ပြောတာမဟုတ်ပေမဲ့ … မြင်တွေ့ ဖြစ်ပျက်နေရတဲ့ … အကြောင်းရာတွေ အပ်ကြောင်းထပ် ၊ နောကြေနေလွန်းလို့ပါ … ။
သူ့သားကို ယူလို့ မတော်ချင်ပဲ တော်လိုက်ရပေမဲ့ … တစ်ကွေ့ ကွေ့ ဒုက္ခပေးဖို့ အသင့်ရှိနေတတ်ပါတယ်.. ။ သမီးမွေးတုန်းကတောင် ခြေမွှေးမီးမလောင် ၊ လက်မွှေးမီးမလောင် ၊ မဆူရက် ၊ မခိုင်းရက်ထားပေမဲ … သားကယူလာလို့ … သမီးဖြစ်လာတဲ့ ချွေးမအပေါ်မှာတော့… အိမ်ဖော်တစ်ယောက်လို ဆက်ဆံချင်စိတ်အမြဲရှိပါတယ် … ။ ငါ့သားကို ယူတဲ့အတွက် … ခိုင်းစားမယ်ဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးလည်း …. အမြဲရှိနေတတ်တဲ့လူပေါ့ … ။ စားစရာသောက်စရာ စိုစိုပြေပြေဖြစ်တတ်တဲ့နေ့ဆိုလျှင်တော့ … အဲ့ဒီ အိမ်ဖော် သာသာ ချွေးမအတွက် …. မေ့လျော့နေတတ်ပါတယ် … ။ အားကိုးရတဲ့သားလေး သူများလုသွားတဲ့အခါ …တားမရတဲ့ သားမို့ .. ပေးစားလိုက်ရပေမဲ့…. လင်မယား ပြသနာ အမြဲတတ်အောင် ကြံစည် တွေးတော နေတတ်တဲ့ လူမျိုးပေါ့ … ။ တစ်ခါတစ်ရံ … အမြင်မကြည်တဲ့အခါ သမီးရင်းဖြစ်သူနဲ့ တိုင်ပင်ပြီး ချွေးမကို ချောက်ချမယ် … လင်မယားကြားရန်တိုက်ပေးမယ် စတဲ့ အရည်ချင်းတွေကို ဗြောင်လိမ်ဗြောင်စား လုပ်တတ်သူမျိုးပါ ။ ကိုယ် ကိုယ်တိုင်ကလည်းသူများသားကို ယူလိုက်လို့ ချွေးမဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ဘ၀ကို မေ့လျှော့ရန် ဟန်ဆောင်နေတဲ့လူမျိုးပေါ့ … အဲ့ဒီလို ယောက္ခမမျိုးကိုတော့ … ကျွန်မက အကျင့်ပုပ်တဲ့ ယောက္ခမလို့ နာမည်ပေးချင်ပါတယ် …စိတ်ဓါတ် နိမ့်ကျတဲ့ အသက်ကြီးပြီး အချိန်မစီးတဲ့ အမျိုးစား ယောက္ခမပါပဲ ။ ချွေးမက အပြင်အလုပ်လုပ်တဲ့လူဆိုလျှင်တော့ … အလုပ်ထွက်ရကိန်းပါ … ။ စွာတဲ့ ချွေးမမျိုးနဲ့တွေ့လျှင်တော့ ခဏခဏ စကားများနေရမှာပါပဲ … ။
နိုင်ထက်စီးနင်း ယောက္ခမ ။
သားကိုယူပြီး … အိမ်ခွဲနေမှာ မကြိုက်လို့ ဆိုတဲ့ … အကြောင်းပြချက်တွေပေးပြီး …. ကူဖော်လောင်ဖက် ရအောင် … အိမ်ပေါ်တင် အလုပ်ကျွေးပြုစုခိုင်းတဲ့ ယောက္ခမ အမျိုးစားပါ … ။ ယခင်ကတော့ ဘယ်လို နေထိုင်လဲမသိပေမဲ့ … သားက ယူထားတဲ့ မိန်းမအပေါ် မိသားစုဝင်အနေနဲ့ မဆက်ဆံပဲ …. အလုပ်ခိုင်းစရာလူတစ်ယောက် အဖြစ်သာ လက်ခံထားသူမျိုးပါ … ။ မီးဖိုချောင် ၊ အိမ်တွင်းသန့်ရှင်းရေးနဲ့ …တခြား သာရေး ၊ နာရေးတွေကိုပါ … ချွေးမတာဝန်လို့ .. လွဲပေးတဲ့လူမျိုးပေါ့ … ။ သူတို့ကတော့ … ၀ိုင်းဖွဲ့ အတင်းဖျင်းပြောဖို့လောက်သာ စိတ်ဝင်စားတဲ့လူမျိုးပါ … တနေကုန်ဇယ်ဆတ်သလို အလုပ်လုပ်ရတဲ့ချွေးမကိုလည်း … ကြုံလျှင် ကြုံသလို နှိပ်ကွတ်ဖို့ … ပညာပေးဖို့ … အသင့်ရှိနေသူမျိုးပေါ့ … ။ ငါက လူကြီးပဲ … ငါခိုင်းသမျှ သူလုပ်ရမှာပဲ … သူက ငါ့အိမ်မှာနေတာဆိုတဲ့ အတွေးမှားတွေနဲ့ … အမြဲ အနိုင်လိုချင်သူမျိုးပါ … ။ လက်ဖျား ခါလောက်အောင် စကားပြောကျွမ်းကျင်ပြီး … မနိုင်ဝန်ထမ်းရတဲ့ … အလုပ်များကိုလည်း ချွေးမအတွက် သဘောထားကြီးဟန်နဲ့ … ချန်ထားပေးသူမျိုးပေါ့ … ။ ပြသနာ တစ်ခုခုတက်လာလျှင် …ငါ့သားပဲ ငါကြိုးကိုင်လို့ ရတယ်ဆိုတဲ့ စကားကို လက်ကိုင်ထားပြီး …သူတပါး အိမ်ထောင်ရေး ပြိုကွဲအောင် သွေးအေးအေးနဲ့… လေပြေအေးတိုက်ကျွေးတတ်တဲ့လူမျိုးလေ … ။ သူက အနိုင်ကျင့်ပြီး ချွေးမက ပြောမရဆိုမရ ၊ ငပျင်းမမို့ …သူချည်းပဲ အိမ်တွင်းမှူဝင်လုပ်နေရကြောင်း သွားပုတ်လေလွင့်ပြောတတ်တဲ့လူမျိုးပါ ။ ခပ်အေးအေး ချွေးမမျိုးနဲ့တွေ့လျှင်တော့ … သူပြောသမျှ အနိုင်ရနေပေမဲ့ … ခပ်စွာစွာ ချွေးမမျိုးနဲ့ကတော့ … တရက်တောင် တည့်ဖို့ မလွယ်တဲ့လူမျိုးပါပဲ… ။ စိတ်မထင်လျှင် ချွေးမနဲ့ ယောက္ခမ နားပန်း သတ်ပွဲတောင် ဖြစ်နိုင်တဲ့ အနေထားပါ ။
လောဘကြီးတဲ့ ယောက္ခမ ။
ဒီလိုယောက္ခမျိုးကတောင် ဖြစ်နိုင်လျှင် သားကိုပါ လေလံတင်ရောင်းစားချင်တဲ့ လူစားမျိုးပါ … သား အိမ်ထောင်ဘက်ကို မိမိစိတ်ဆန္ဒအရ ကိန်းဂဏန်းများဖြင့် ရွှေးချယ်တတ်တဲ့ လူမျိုးပါပဲ …. ။ မျက်နှာအလှ၊စိတ်ထားအလှထက် ပိုင်ဆိုင်မှူဘက်ကို ပို အားသာနေသူမျိုးပါပဲ …. ။ သားရဲ့ အိမ်ထောင်ဘက်ကိုလည်း ဖြစ်နိုင်လျှင် သကြားမင်းသမီးနဲ့ ပေးစားချင်တဲ့လူမျိုးပါပဲ … ။ ဒီလို လူမျိုးကိုတော့ … မျောက်ပြပြီး ဆန်တောင်းတဲ့ ယောက္ခ ၊ လောဘကြီးတဲ့ ယောက္ခမလို့ … ကျွန်မက အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုချင်ပါတယ်… ။ ဒီအချိန် သားကလည်း … အဖိုးတန် အမျိုးမှန်လေးဆိုလျှင် …ကမ္ဘာပတ်ပြီး ချွေးမတောင် ရွေးချင်တဲ့လူမျိုးပါပဲ … လွန်ကဲတဲ့ လောစိတ်တွေ ပြည့်နှက်နေသူပေါ့ … ။ ငါးစာမြင်ပြီး ငါးမျှားချိတ်မတွေ့သူမျိုးပါ … ။တစ်ဖက်က မိန်းကလေး အကြောင်းကို ရေရေ ရာရာမသိပဲ … မိန်းကလေး မိဘ ၊ အသိုင်းဝိုင်း ပိုင်ဆိုင်မှူလောက်ကိုသာ တွေးပြီး … ရွှေးချယ်တတ်သူများပါပဲ ။ သားချစ်တာ ၊ သဘောကျတာ အဓိကမဟုတ်ပဲ … တဘက်က မိန်းကလေး အသိုင်းဝိုင်း ဘယ်လောက် ပံ့ပိုးပေးနိုင်လဲ ဆိုတာမျိုးကို ဦးနှောက်ထဲ ကတ်ကူလေတာ တစ်ခု ထည့်သွင်း တွက်ချက်နေတတ်သူမျိုးပေါ့ … ။ လည်လွန်းတဲ့ဘီးမို့ လားမသိ .. .နောက်ဆုံးတော့ နွားမ ရွံ့ ပိတ်တွေနဲ့ ချည်း တိုးတတ်တာမျိုးပါ … အလိုကြီး အရနည်းတဲ့ သာဓကတွေလည်း ရှိခဲ့ပါတယ် … ။ ဒီလို ယောက္ခမျိုးကျတော့လည်း … အိမ်ခွဲနေတာ ၊ မနေတာကို အဓိက ပြသနာမလုပ်ပါဘူး… .. သမီးရှင်ဘက်က ကမ်းလှမ်းလျှင်တောင် သူတို့သားကို ခမည်းခမက်အိမ် ထည့်ပေးလိုက်မယ့် လူမျိုးပါပဲ … ။ဒါပေမဲ့….ကိုယ့်ဆီလာလည်လျှင်တော့ လက်ချည်း သက်သက်လာတဲ့အခါ သိသလိုတမျိုး ၊ မသိသလို တမျိုး … နောက်တခါ လက်ဆောင်ဝယ်လာဖို့ … သတိပေးတတ်သူမျိုးပေါ့ … ။ အဲ့ဒီလို ယောက္ခမျိုးကတော့ … ချွေးမကို မြှောက်ပင့်ထားပါတယ် …. ပါးစပ်ဖြားကလည်း သမီး ၊ သမီး နဲ့ … မချစတမ်းခေါ်လို့ပေါ့ … ။ သူတင်မကဘူး … သူ့မှာရှိတဲ့ သမီးတွေကိုပါ .. မမ ၊ ညီမလေး … စသဖြင့် ပေါင်းတတ်သင်းတတ်အောင် သင်ပြနိုင်စွမ်းရှိသူပေါ့ … ။ ဒီလို ယောက္ခမျိုးနဲ့တွေ့တဲ့ ချွေးမကတော့….အနှိမ်ခံရတာမျိုး မရှိပဲနဲ့ …သူကသာ ယောက္ခမကို မီးဖိုချောင် အလုပ်ပြန်ခိုင်းနိုင်သူများပါပဲ … ။
သူမကတော့ တကယ့်ကို လေးစားထိုက်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ထဲမှာ ပါပါတယ် … ။ ၀မ်းနဲ့ လွယ်ပြီး မမွေးထားရပေမဲ့ … သားကယူလို့ ရလာတဲ့ သမီးချွေးမကို တကယ့်သမီးရင်းလို စိတ်ထားပြည့်ပြည့်၀၀နဲ့ … ချစ်ခင် သွန်သင် ဆုံးမတတ်သူမျိုးပါပဲ … ။ ချွေးမနဲ့ ကျန်တဲ့ သားသမီးတွေ အပေါ်မှာလည်း ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်အောင် ပေါင်းကူးလုပ်ဆောင်ပေးတတ်သူမျိုးပါ ။ သားရဲ့ အကြိုက်ကို သိနေတဲ့ အမေဖြစ်တာကြောင့် …. ချွေးမကိုလည်း ကောင်းကောင်းအကြံပေးနိုင်သူမျိုးပေါ့ … ။ အိမ်မှူကိစ္စဆိုလည်း တတ်အားသရွှေ ကူညီလုပ်ကိုင်ပေးတဲ့ ယောက္ခမမျိုးပါ … ရှိတော့ရှိပေမဲ့ … ရှားတဲ့ အမျိုးစားထားကပါပဲ … ။ သားယူလိုက်တဲ့ မိန်းမအပေါ် အမြတ်ဒေါသမထွက်ပဲ အချိန်တန်လို့ … အိမ်ထောင်ပြုတာပါ ဒါလောက သဘာဝကျင့်ဝတ်ပါလို့ … နားလည် လက်ခံပေးသူမျိုးပါ ။
ဒီလို ယောက္ခမျိုးနဲ့ တွေ့တဲ့ … ချွေးမက … ပိပိရိရိ နဲ့ ပါးနပ်တဲ့ မိန်းကလေးမျိုးဆိုလျှင်တော့ … .အိမ်တွင်းရေးအလွန်သာယာပါလိမ့်မယ် … ။ ပျော်စရာကောင်းတဲ့ မိသားစုလေးကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မယ် … ။ အဲ့ဒီလို မဟုတ်ဘူး … ကောက်ကျစ် နိမ့်ကျတဲ့ စိတ်ဓါတ်ရှိသူ ချွေးမနဲ့ တွေ့လျှင်တော့ … ယောက္ခမကချည်းပဲ အနိုင်ကျင့်ခံရပါလိမ့်မယ် … ။ ရိုင်းပြစော်ကားခံရသော်လည်း… သားကို ပြန်မတိုင်ရက်တာကြောင့် … မပြောဆို မဆက်ဆံမိအောင် နှုတ်ဆိတ်နေခြင်းဖြင့် … အိမ်တွင်းရေးပါ ခြောက်သွေးစေနိုင်ပါတယ် ။ ချွေးမဧ။် ကလိန်ဥာဏ်ကျမှူကြောင့် … နောက်ဆုံး … မိမိမွေးထားသော သားကပင် ကိုယ့်ကို အထင်လွဲတာမျိုးတွေပါ ကြုံတတ်ပါတယ် ။ ဒါကြောင့်လည်း ထင်ပါရဲ့ … ရှေးလူကြီးတွေ ပြောခဲ့တာ … မယားပြောတော့ တစ်ညတဲ့… မိဘပြောတော့ တစ်လတဲ့လေ … ။
ကျွန်မစိတ်ထဲ အကောင်းဆုံးလို့ တွေးမှတ်ထားတာကတော့ … အိမ်ထောင်တစ်ခု ဖန်တီးတည်ထောင်ကြပြီဆိုလျှင် ဘယ်မိဘအိမ်မှာမှ မနေပဲ … အိမ်ခွဲနေကြတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ …အိမ်စရိတ်ထောင်းပေမဲ့ … ကြားလူဝင်နှောက်လို့ ဖြစ်ရတဲ့ ပြသနာမျိုး မရှိတော့ဘူးလေ ။ အမြဲတွေ့နေရလျှင်သာ ယောက္ခမနဲ့ ချွေးမပြသနာ တစ်ကြတ်ကြတ်ဖြစ်နေကြပေမဲ့ …ခဏတဖြုတ်သွားလည် တဲ့အခါ … အရမ်းကို အဆင်ပြေနေတာမျိုးပါ … သိတတ်သမှူနဲ့ … လက်ဆောင်လေး ၊ စားစရာလေး ၀ယ်သွားလျှင်တော့ .. အကောင်းဆုံးပေါ့ … ။
ရွာသူရွာသားတို့ အိမ်တွင်းရေးလည်း အဆင်ပြေ သာယာကြပါစေလို့ … ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်နော် ။ ။
နင်တို့ဖာသာနင်တို့ မတည့်တာ ငါနဲ့ဘာဆိုင်လို့တုံး :mad:
အိမ်ခွဲ နေပြီး ယောက်ခထီး ယောက်ခမ ကို ကိုယ့်မိဘ လို သဘောထား ရင် အကောင်းဆုံးပဲ ပေါ့ နော်
မမ အီးတုံး ။
ဖတ်လို့ ကောင်းတယ်ဗျာ ။ ကျေးဇူးပါပဲ ။
ယောက်ခမ ဆိုတာ တချိန်က ချွေးမပါပဲ။ ချွေးမဟာလဲ တချိန်မှာ ယောက်ခမဖြစ်မှာပဲ။ ယောက်ခမ မကောင်းဘူးဆို ကိုယ် ယောက်ခမ ဖြစ်ချိန်မှာတော့ ကိုယ်လဲမကောင်း ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ဒီဇာတ်လမ်း ကရှည်တယ်…ကျွန်တေ်ာကြားဖူးတာက တိုတယ်…ဒါပေမယ့် …ဒါကပိုကောင်းတယ်
တို့ကတော့ ယောက်ခမနဲ့ မနေဘူး။
တို့ယောက်ခမဖြစ်လည်း မကောင်းတဲ့စိတ် မမွေးဘူး။
ကိုယ်ကတော့….. မိန်းမ မယူ ဘူး ဆိုတော့ အဲလို ယောက္ခမတွေ နဲ့ လည်းမတွေ့ ရဘူး။ပျော်လိုက်တာ။
မိန်းမ က ပုကျိ ပုကျိနဲ့ည ည လာပြောနေမှာလည်း ကြုံချင်ဘူး။
လူပျိုကြီး လုပ်တာပဲကောင်းတယ် ။
အင်းးး ငယ်ငယ်က အဖွားကြီးတစ်ယောက်ကိုတွေ့ဖူးတယ်..။ ငှကိပျောသီအမွှာလေ…… သူ့သမီးတွေ မစားရဘူးတဲ့ မကျွေးဘူးဗျာ…..။ သူ့သာ ကျတော့ စားတဲ့…။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ငှက်ပျောသီး အမွှာစားရင် ကလေးမွေးရင် အမွှာမွေးတတ်လို့တဲ့…။ သားကယူတဲ့ ချွေးမက အမွှာမွေးချင်မွေပါစေပေါ့…။ သူ့သမီး မမွေး စေရဘူးပေါ့…။ အယူသီးတာတောင် အဲဒိလို အယူသီးတာတွေ့ဘူးတယ်..။
တုံမမရေ မမှီ အိမ်ထောင်ကျတော့ မမှီအမေက မှာလိုက်တယ် ကိုယ်ကသာ အနစ်နာခံမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကို မွေးထား မတည့်ဘူးဆိုတာ မရှိပါဘူးတဲ့။ တအိမ်တည်း နေလို့လည်း မဟုတ်ဘူး ချိပ် ချိပ်ချင်းမို့ ချိပ်ကျတာတဲ့။
အဲဒါကြောင့် သမီးယူမယ်ဆို အမေကိုကြည့်လို့ ဆိုရိုးစကား ရှိခဲ့တာပေ့ါ။
ဆိုးသွမ်းတဲ့ ယောက္ခမတွေ နဲ့ မကြုံရအောင် ချစ်သူရှိနေပြီ ဆိုရင် နှစ်ကိုယ်တူ သစ္စာထားလို့ သေချာ ညှိနှိုင်းထားပေါ့..
ဖေဖေ မေမေ တို့ မျက်ကွယ်ပြုရင် ယူမယ်လို့..
အသက်ကြီးတဲ့ လူဆိုတာ ရာနှုန်းအားဖြင့် အရင်သေဖို့ များတယ်။
အဲဒီတော့မှ ယူပေါ့. ဆရာကြီး လာလုပ်မဲ့သူ မရှိနိုင်တော့ဘူး။ နှစ်ယောက်လုံးလည်း အသက်တွေ ကြီးနေပြီ ဆိုတော့ ဆရာကြီး တွေ ဖြစ်နေလောက်မှာပေါ့.. ;)
အော် ဆူးမမ အပျိုကြီး ဖြစ်နေတာ ဒါကြောင့်ကို
အဟီး … ဘာရယ်ညာရယ်မဟုတ်ပါဘူး …မျက်စိရှေ့ မြင်ရတွေ့ရ အချိုးမကျတာလေးတွေကို စာစီလိုက်တာပါ … ။ ကိုယ်တိုင်ကတော့ ကြုံဖူးပေါင် … single မို့လို့ … :D:D
မဆီမဆိုင် မင်းဘယ်သူ့ကိုရေးတာလဲ ဆိုတာမျိုးတော့ အရစ်ခံလိုက်ရသေးတယ် … ။
“ဒီချွေးမ ငါ့သားအပေါ် အနွံအတာမှခံရဲလား”
“ဒီသားမက် ငါ့သမီးအပေါ် အနိုင်များကျင့်နေမလား”
“ငါ့သမီးကို အ၀တ်တွေကူလျှော်ပေးတယ်ဆိုပဲ၊ ကောင်းလေစွ”
“ဘာ!! င့ါသားက ဈေးသွားဝယ်ရတယ်၊ ဟုတ်လား”
“င့ါအစ်ကို မိန်မရသွားတော့ ငါ့တို့ကို မုန့်ဖိုးအရင်ကလိုမပေးတော့ရင် ဒုက္ခ”
“ငါ့ယောက်ျား င့ါကိုပိုက်ဆံအကုန်မအပ်ဘဲ သူ့အမေတို့၊ သူ့ညီမတွေ ပူဆာသမျှ ၀ယ်ပေးနေရင် ဒုက္ခ”
အိမ်ထောင်ပြုမယ် ဆိုရင် တအိုးတအိမ် ခွဲပြီး နေနိုင်မှ ပြု
ဘယ် ဆွေမျိုး ဘယ်မိဘ အိမ်မှ မတက်နဲ့
နှစ်ယောက်သား အသွင် တူနိုင်ပေမယ့် .
တခြားလူတွေ ပါ များလာရင် တယောက် တပေါက် နဲ့ ပြဿနာတွေ ရှင်းလို့ ဆုံးမှာ မဟုတ်ဘူး
လူတွေဟာ အားလုံးနီးပါးက အတ္တ သမားတွေ
အဲဒါကြောင့် အိမ်ခွဲနေကြတယ် .. နီးတကျက်ကျက် ဝေးတသက်သက် ဆိုတာ မှန်တယ် ..